မြတ်လေးငုံ: “ နယူးဇီလန်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ Hon. David Carter ဦးဆောင်သော ပါလီမန်အမတ်များ အဖွဲ. မြန်မာနိုင်ငံသို.သွားရောက်မည်။”
“ နယူးဇီလန်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ Hon. David Carter ဦးဆောင်သော ပါလီမန်အမတ်များ အဖွဲ. မြန်မာနိုင်ငံသို.သွားရောက်မည်။”
( Ref: New Zealand Parliament )
လက်ရှိလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ် များအားလေ့လာရန်နှင့်မကြာခင် ကလာရောက်ခဲ့သော မြန်မာသမ္မတနှင့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌတို.နှင့်ဆက်စပ်သောအပြန်အလှန်ခရီးစဉ်
ဖြစ်ပြီး၊နေုပြည်တော်တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ နိုဘယ်ငြိမ်းရေးဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၄င်းအပြင် အထက်နှင့်အောက် လွှတ်တော်ဥက္ကဌများအားလည်းတွေ.ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
ရန်ကုန်ုမြို့တွင် နယူးဇီလန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပညာရှင်များအားတွေဆုံရန် ရှိကာ ထောက်ကြံစစ် သချိုင်း သို.လည်းဂါဝရပြုသွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုခရီးစဉ်တွင် မြန်မာ့အရေးအစဉ်ထောက်ခံအားပေးလျက်ရှိသော Dr Rajen Prasad (Labour)။ David Clendon (Green) တို.ပါဝင်ကာ Hon Philip Heatley (National) ။ Tracey Martin (NZ First) တို.လိုက်ပါသွားကြသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, October 03, 2013